Ungancika kanjani kusuka kokusondeza ebusuku
Ngokushesha wonke umama unemibuzo: kanjani ukuguqula ubusuku bokuntana wakhe? Ingane ayikhathali ngokuthola ubisi, ngakho-ke ukuvuka ebusuku kuyinto injabulo nje. Futhi umama osemncane unezimo ezihlukene, okusho ukuthi ukudla ebusuku kungenza kube nzima.
Uma ingane isondla ngokwemvelo, ukudla ebusuku kungenziwa ukubambezeleka isikhathi eside. Kubanikazi bezinto, izinto zihlukile, zanconywa kakhulu ekuqaleni: ezinye izinsana kakade ezinyangeni ezintathu azivuki ebusuku ukuze zidle. Kungakhathaliseki ukuthi umama wanquma yini ukuncelisa ingane kusukela ekudleni ebusuku, kufanele azi imithetho ethile.
Isinyathelo sokuqala ukubonisana nodokotela wezingane. Uma ingane ingekho isisindo esihle, asikho isidingo sokuyeka ukudla ebusuku, ngoba ebusuku, ukungenisa ubisi kuyanda, okusho ukuthi ingane igcwele igesi. Kodwa-ke, uma ingane isaphezu komzimba, ukukhansela ubusuku bokudla kungenzeka. Ngesisindo esivamile, unina angakwazi ukuzikhethela ukuthi uyawuthanda yini noma cha.
Indlela yokunciphisa umntwana ukuba adle ebusuku?
Kunezinhlobo eziningana zezindlela eziyinkimbinkimbi kakhulu zokungavumelani ingane kusukela kokudla ebusuku. Lezi zindlela zifanelekayo kokubili izingane ezisalisayo, kanye nalabo abathandayo ubisi.
Ukuze uncelise ingane ukuba idle ebusuku, kufanele ukwandise inani lokuphakelayo phakathi nosuku. Ngolunye usuku ingane kufanele ithole ivolumu yobisi, ayisebenzisayo ngosuku olulandelayo. Ukudla kokugcina ngaphambi kokulala kufanele kube mnandi. Njengomthetho, ingane ngokuvamile idla ebusuku kulezo zimo lapho usuku engenawo ubisi olwanele. Kwenzeka ukuthi omama abasha banomatasa kakhulu ngemisebenzi yasendlini futhi bakhohlwa ngomntwana wabo okwesikhashana. Uma lesi simo sesiba yinto evamile, umntwana uzovuka ebusuku futhi afune ukuthi aphethwe. Ngakho ingane ifuna ukugcwalisa ukuntuleka kokunakekelwa komama. Uma umama weza ukusebenza ekuseni, okusho ukuthi akayiboni ingane yakhe usuku lonke, khona-ke umntwana uzovuswa ebusuku.
Uma ingane ilala ekuseni kakhulu, lapho abazali bengalali okwamanje, ke, ngaphambi kokulala, umama kufanele akwazi ukuvusa umntwana futhi amnike ukudla. Khona-ke ingane izolala isikhathi eside, futhi umama uzoba nokuphumula okude. Ezimweni ezimbi kakhulu, ingane izovusa umama isikhathi esingaphansi kokujwayelekile.
Uma ingane iseneminyaka engaphezu kwonyaka ubudala futhi unina uzokhulelwa ebusuku, ngakho-ke ingane ingabekwa kwelinye ikamelo. Okukhethwa kukho kungcono uma udadewabo omdala noma umfowethu elele kwelinye igumbi nomntwana. Khona-ke izinyane lizogxila esimweni esisha futhi ngokushesha zikhohlwe ngokudla kokuhlwa. Njengoba ukhetha, ungakhuluma nengane bese uyichazela ukuthi wayiphuza lonke ubisi emini, yingakho kungekho lutho ebusuku. Kule minyaka yobudala, ingane isivele ingakwazi ukukhuluma ngamagama.
Ingabe ingane imisa ukudla ebusuku?
Yiqiniso, zonke izingane ziyisikhathi somuntu ngamunye futhi esithile, lapho ingane ingasadingi ukudla ebusuku, cha. Nokho, ngelinye ilanga le nkathi izofika noma kunjalo. Njengomkhuba wokubonisa, omama abasha bakhathele ebusuku besondla kakhulu kunalokho akudingekile kubantwana. Ngokusho kochwepheshe, ngaphambi kokuqala ukuncelisa ingane ekudleni ebusuku, zonke izimo ezidingekayo kufanele zenziwe ngenxa yalokhu, konke kufanele kube mnene futhi kancane kancane. Akufanele neze ingane ihlupheke ngoba engasamukeli ingxenye yokudla ebusuku. Ungaqala ukufunda kusukela ngesikhathi lapho umntwana eneminyaka emihlanu noma eyisithupha ubudala. Kule minyaka yobudala, ingane ingakwazi ukukhuthazelela kalula ukulahlekelwa okunjalo. Mhlawumbe ubusuku obuthathu ingane ingavumi ukuba abazali bayo balele, kuyodinga isifuba noma ingxube, kodwa ngemva kwamasonto amabili, njengomthetho, ingane isuliwe.
Uma ingane icela ubusuku bonke, lokhu akusho ukuthi ulambile kakhulu. Ngokuvamile lokho kusikisela ukuthi akawutholi ngokugcwele umama, isb. Ngakho uyanelisa izidingo zakhe ezingokomzwelo. Lesi simo singenzeki nje kuphela usana, kodwa futhi ingane ingaphezu kweminyaka eyodwa. Kulesi simo, kubalulekile ukuqala ukuxhumana nomntwana ngosuku - ukukhuluma okuningi, ukudlala, ukuthatha izandla.
Ukudla okunempilo - ukuthuthukiswa kwezingane
Ukuncintisana ukhula kusuka esifubeni
Isondlo esifanele ngomlomo wengane
Izitshalo zokudla kwasekuseni, amaphutha
Izitsha ezihlwabusayo nezempilo zengane
Kungcono nini ukudla imikhiqizo yobisi?
Amadodakazikazi ahamba phambili kunazo zonke
Ummeli womndeni uFriske usongela ukuboshwa kukaShepelev
I-lasatta yenyama, iresiphi
Kungani indoda yashintsha ingqondo yakhe ngokushada nawe?
Qonda izimpawu zomzimba zomzimba
Indlela yokuphatha amehlo?
Indlela yokufundisa i-parrot ukuba ibhukude?
Ikhekhe nama-oranges ne-yogurt
I-Tortellini nge-sausage ne-tomato sauce
Ukusetshenziswa kwe-wine therapy kanye namagilebhisi ku-cosmetology
Kungani ungadli emva kwamahora angu-18
I-Salmon ene-sauce ye-avocado
Izembatho zabafazi abakhulelwe
I-Solarium, indlela yokushisa ilanga kahle
Ukuhalalisela kakhulu kubafana ngoFebhuwari 23 evesini naseprose